यथार्थ नबुझी बाहिर आउँदा समस्या आईदिन्छन् - Vishwa News
August 23, 2019 ० बिचार / प्रतिक्रिया
उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री
पछिल्लो समय सबैभन्दा बढी चर्चा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को स्कूल विभागको विषयलाई लिएर चर्चा भयो । शुरुमा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोख्रेलले त्यो विभागको जिम्मेवारी पाउने चर्चा भए पनि पछिल्लो समय त्यो विभागका आकांक्षी बढ्दै गए । नारायणकाजी श्रेष्ठ, बेदुराम भुसाल, घनश्याम भुसालले मात्रै होइन पूर्व अध्यक्ष झलनाथ खनालले समेत स्कूल विभागमा चासो देखाए । तर, अन्तिममा ईश्वर पोख्रेलले नै बाजी मारे । पोख्रेलसँग यिनै विषयमा मोहन बास्तोलाले गरेको कुराकानी
निकै चर्चामा रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को स्कूल विभागको जिम्मेवारी प्राप्त गर्नुभयो । सबैभन्दा पहिला त बधाई छ ?
– धन्यवाद ।
यो विभागको जिम्मेवारी प्राप्त गरेपछि यो सन्दर्भमा चाहिँ तपाईंको प्रतिक्रिया के छ ?
– म पार्टीको एउटा जिम्मेवार कार्यकर्ता भएको नाताले मैले पार्टीले दिएका हरेक जिम्मेवारीलाई यो अघि पनि पूरा गर्दै आएको इतिहास साक्षी छ । त्यसै क्रममा अहिले मलाई पार्टी स्कूल विभागको जिम्मेवारी पार्टी सचिवालयको निर्णयबाट मैले प्राप्त गरेको छु । मैले पहिला प्राप्त गरेका जिम्मेवारीलाई मेरो योग्यता, क्षमताले पूरा गर्ने प्रयत्न गरे जस्तै यो जिम्मेवारी पनि पूरा गर्ने गरी लाग्ने छु ।
तत्कालीन नेकपा एमालेमा शक्तिशाली महासचिवको जिम्मेवारी सम्हालेको तपाईंसँग अनुभव छ । पार्टी एकता हुँदा स्वाभाविकै रुपमा तपाईं महासचिवको जिम्मेवारीबाट अलग रहनु भयो । अहिले फेरि शक्तिशाली विभागको जिम्मेवारी तपाईंलाई प्राप्त भएको छ । स्कूल विभागमा तपाईंबाहेक अरुले पनि आशा गरेका थिए । तर, अन्तिममा तपाईंले नै प्राप्त गर्नुभयो । अब फरकफरक लक्ष्यसहित हिँडेका दुई कम्युनिष्ट पार्टी एक भएको अवस्थामा विचारलाई पनि संगठित बनाएर लैजानु पर्ने जिम्मेवारी तपाईंले सम्हालेको विभागको काँधमा छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
– यसलाई सबैभन्दा पहिला यसरी बुझ्नु पर्छ । हामी पहिला आआफ्नो बैचारिक मान्यता अनुसार अघि बढेका थियौँ । त्यो सन्दर्भमा कतिपय अवस्थामा हाम्रा आआफ्नौ कार्यशैली पनि थिए । परिवर्तित सन्दर्भमा हामी एक भएका छौँ । अहिले नेकपा एमाले पनि छैन र नेकपा माओवादी केन्द्र पनि छैन । अहिले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा मात्रै छ । त्यसैले अब हाम्रो पार्टीका अध्यक्षदेखि हामी सबैले के बुझ्नु पर्छ भने यो नयाँ पार्टीलाई एकताबद्ध
बनाएर लैजाने हाम्रो संकल्प हो, त्यो बन्नुपर्छ । दुनियाँभरी कम्युनिष्टहरु फुट्न मात्रै जान्दछन् भन्ने असाध्यै नकारात्मक धारणा अहिले फैलिएको छ । यस्तो बेलामा हामी फुट्न मात्रै होइन जुट्न पनि जान्दछौँ भन्ने हामीले एउटा दृष्टान्त प्रस्तुत गरेका छौँ । यहाँको परिस्थिति अनुसार यहाँको माक्र्सवादलाई आफ्नो ढंगले प्रयोग गर्दै अघि बढ्नु पर्छ भन्ने ठाउँमा हामी पुगेका छौँ । विगतमा हाम्रो बारेमा हामी उपयुक्त समयमा बस्तुनिष्ठ समिक्षा गर्ने नै छौँ । तर, अहिले हामी जुन ठाउँमा छौँ । हामी विचारमा समान छौँ । संगठनात्मक हिसावले सुदिृढ बन्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा हामी समान छौँ र नेतृत्व निर्माणको एउटा बैज्ञानिक विधिबाट अघि बढ्नु पर्छ भन्ने कुरामा पनि हामी समान छौँ ।
अलकअलक पृष्ठभूमिबाट आएका दुई पार्टी एक ठाउँमा मिसिएपछि अलिक परसम्म दुई नदी मिल्दा पानीको अलकअलक रंग देखिए जस्तो हुनु स्वाभाविक नै हो । तर, अब हामी एक भै सकेका छौँ अब रगं पनि छुट्याउन सक्ने अवस्थामा छैन । त्यसैले हामी अब एक ढिक्का भएर अघि बढेका छौं।
त्यसैले यति बेला पूर्व नेकपा एमाले र पूर्व नेकपा माओवादीका कुरा अघि सारेर अहिलेको ऐतिहासिक एकतालाई विथोल्ने काम कसैबाट पनि हुनुहुदैँन । यसलाई कमजोर ढंगले बुझ्ने काम पनि कसैबाट गर्नुहुँदैन । त्यो कसैमा पनि छैन । जुन ऐतिहासिक सफलता प्राप्त गरेका छौँ । त्यसलाई पनि व्यवस्थित गर्नु पर्ने गहन जिम्मेवारी चाँहि हाम्रा सामू छ । अहिले पनि कतिपय नमिलेका कुरामा दुई अध्यक्ष बसेर गृहकार्य गर्ने, उहाँहरुले धारणा ल्याउने र हामीले सामूहिक रुपमा निर्णय गरेर पठाउने गरेका छौँ । अझै पनि हामीले एकता प्रक्रियाका केही बाँकी कामलाई टुंगोमा पुर्याउनु पर्ने जिम्मेवारी छ । हामी त्यसलाई पनि जति सक्दो छिटो टुंगोमा पुर्याउने छौँ । हामी यो प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउने वित्तिकै पार्टीको स्थायी कमिटी बैठक पनि राख्छौँ र त्यो बैठकबाट हामीले गर्नुपर्ने थप कामको योजना बनाएर अघि बढ्छौँ । जहाँसम्म पार्टी स्कलू विभागको सन्दर्भ छ । हाम्रो पार्टीमा ३३ आेटा विभाग छन् । ती मध्यको एक महत्वपूर्ण विभाग पार्टी स्कूल विभाग पनि हो । कुनै विभागले आफ्नो छुट्टै नयाँ निर्णय गरेर पार्टी एकातिर विभागहरु अर्कैतिर हुने होइन, हुन सक्दैन । बरु पार्टीले गरेका संस्थागत निर्णयलाई ती विभागले कार्यान्वयन गर्दै जाने हो । विभागले पनि पार्टीलाई चलायमान बनाउन आफनो विभागका गतिविधिलाई सस्ं थागत ढगंले चलायमान बनाउने हो । त्यसलै यसलाई अन्यथा ढंगले बुझ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन र बुझ्न जरुरी पनि छैन ।
अहिले एउटा भ्रमचाँहि के चलाइएको छ भने यो स्कूल विभागको विषयलाई लिएर भयंकर बहस चलाइएको थियो । तर, त्यस्तो होइन त्यो निर्णय गर्ने बेलामा एजेण्डाका रुपमा उठ्यो र हामीले सर्वसहमतिबाट त्यसलाई टुंगोमा पुर्याउने काम गर्यौँ । होला बाहिर समूहमा केही त्यो विषयमा पनि बहस भयो होला तर कमिटीमा पहिलो पटक औपचारिक ढंगले त्यो विषयमा छलफल भयो र हामीले फेरि पनि भन्छु । हामीले सम्र्वसहमति ढंगले निर्णय गर्यौँ ।
कतिपय कुरा बाहिर आउँदा भित्रको यथार्थ नबुझि आइदिन्छन् । अनि हामी त्यसैमा केन्द्रित भएर बहसमा सहभागी भइदिन्छौँ । त्यसले भित्रि कुरालाई बोकेको हुँदैन । यो समस्याका रुपमा पनि आएको छ । यो विषयमा मैले एक शब्दमा भन्दा अरु नेताहरुले विभिन्न जिम्मेवारी पाउनु भयो त्यति मध्येको एउटा जिम्मेवारी मैले पनि पाएको हुँ।
भनेपछि यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो ?
– हो, मैले अघि पनि भने यो विभाग मैले पाउने वित्तिकै मैले फरक ढंगले चलाउने कुरा त होइन । मैले पार्टीको निर्णय अनुसार नै चलाउने हो । त्यसैले यो विषयमा धेरै बहस र चर्चा गर्नुको औचित्य छ जस्तो मलाई लाग्दैन । हरेक विभाग पार्टीको अधिनस्त भएर चलेका हुन्छन् । याजे ना पनि त्यसै अनुसार चल्ने हुन् । मैले पनि चलाउने त्यसैगरी हो ।
भनेपछि बैचारिक रुपमा दुई पार्टीलाई एक बनाएर अघि लैजाने कुरामा तपाईँको भूमिका महत्वपूर्ण रहने छ ?
हामी जुन बैचारिक जगमा उभिएका छाँै । त्यो जगमा उभिएर त्योसँग गाासिएका कतिपय पृथकपृथक लाग्ने पृथकपृथक देखिने कुरालाई मिलाएर जानुपर्छ, त्यसको विकल्प छैन । फेरि पनि भन्न चाहन्छु अब एमाले पनि छैन । माओवादी पनि छैन । अहिले हामी सबै नयाँ पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा भएका छौँ । हामी त्यहि अनुसार नै अघि बढ्नुपर्छ । यो पार्टीमा सुसंगत, बैचारिक श्रृंखला हुनुपर्छ त्यो भएन भने त्यो विचार बोकेर हिड्ने मान्छेहरुको पब्क्ति पनि कमजोर भएर जान्छ । त्यसैले यो कुरामा पनि हामीले हेक्का राख्न जरुरी छ ।
आज हामी संविधानको सर्वोच्चता, कानुनको शासन, आवधिक निर्वाचन, प्रतिस्पर्धाको राजनीति, शान्तिपूर्ण प्रर्दशनको कुरा, नियन्त्रण र सन्तुलनको कुरा, समाजका बहलुता, बहलुवादी खुला समाज जस्ता कुरालाई हामी मानेर अघि बढिरहेका छौँ । वास्तवमा भन्ने हो भने हामी यस्ता कुराबाट निर्देशित भएर हामी अघि बढ्ने हो । राज्य सञ्चालनका यी मुलभूत कुरालाई हेक्का राख्दै अघि बढ्नु पर्ने पनि दायित्व छ ।
हाम्रो यतिबेलाको विचार यी नै कुरामा निर्देशित भएर अघि बढ्छदै माक्र्सवादलाई सिर्जनात्मक ढंगले लागु गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने कुरामा पनि ध्यान दिन जरुरी छ । पार्टी स्कूल विभागले पनि यी कुरालाई नै सिर्जनात्मक ढंगले देशव्यापि ढंगले पार्टी पब्क्तिमा लैजान्छ ।
७० वर्षको इतिहासलाई हेर्ने हो थुप्रै पटक टुटफुटको सिकार कम्युनिष्ट पार्टी पनि भयो । अब एकताबद्ध सन्देश दिएर अघि बढ्नु हुन्छ ?
– निश्चय पनि ।
काठमाडौं उपत्यकामा थप १ सय ३८ जनामा कोरोना संक्रमण
नेपालमा थप १ सय ४४ जनामा कोरोना संक्रमण
अब काठमाडौंका नाकाबाट प्रवेश बन्द, कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट चाहिने
बारामा बसले स्कुटरलाई ठक्कर दियो, एकै परिवारको तीनको मृत्यु
हिमालय एयरलाइन्सलाई ‘सेल्फ ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ’ दिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नर्गनु- मन्त्री भट्टराई
नेपालमा एकै दिन १० जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु
काठमाडौंमा ६३३ सहित उपत्यकामा थपिए ८०९ कोरोना संक्रमित
नेपालमा थप १५७३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, संक्रमितको संख्या ७३ हजार नाघ्यो
विदेशबाट ७८ हजार नेपालीको उद्धार, एकैसाता २१ जनाको कोरोनाबाट मृत्यु
आजबाट मौसममा सुधार, कुन क्षेत्रमा कस्तो रहला मौसम ?
त्रिविमा रोकिएका परीक्षा छठपछि धमाधम
चलचित्र निर्देशक एवं लेखक छेतन गुरुङको निधन